About | Kandiyohi County DFL
Minnesota DFL waxay taageertaa kana shaqeysaa dejinta mabaadi'da Xisbiga Dimuqraadiga.
Waxaan aaminsanahay in qof kasta oo Mareykan ah iyo reer Minnesota, ayada oo aan loo eegin astaamahooda aan la beddeli karin ay xaq u leeyihiin shaqo deggan oo leh mushahar caddaalad ah, waxbarasho habboon, kor u qaadista iyo bixinta qoys, helitaanka daryeel caafimaad oo la heli karo oo la awoodi karo, si loogu noolaado bulshooyinka nabdoon, iyo in laga fariisto sharaf iyo amni leh.
Intii lagu gudajiray taariikhda Xisbigeena, waxbadan ayaa qabsoomay anaguna hadaan nahay Xisbiga DFL waxaan sii wadaynaa ka shaqeynta wanagsan Minnesota iyo qaran ilaa berri iyo wixii ka dambeeya.
In ka badan toddobaatan sannadood, DFL Minnesota ayaa kawada shaqeeyay saaraya siyaasado horusocod ah oo la siiyo boosteejo ah oo loogu talagalay dadka u baahan ugu. Waxaan aaminsanahay in qofkasta oo reer Minnesota ah uu xaq u leeyahay inuu helo shaqo deggan oo leh mushahar xaq ah, inuu helo waxbarasho sax ah, inuu koriyo oo uu siiyo qoys, inuu helo daryeel caafimaad oo la heli karo oo la awoodi karo, inuu la noolaado bulshooyinka nabdoon, iyo inuu howlgabnimo sharaf iyo nabadgelyo ku noolaado. Waxaan ku talaabsanay horumar badan intii aan ku guda jirnay taariikhda xisbigeenna, laakiin weli waxaa jira waxyaabo badan oo la doonayo in la sameeyo si loo hubiyo in aan cidna laga harin. Wadajir, waxaan sii wadeynaa inaan dhisno xitaa Minnesota ka wanaagsan dhamaan reer Minnesota.
Akhriso Dastuurkeena & Xeer -hoosaadkeena